Brush enye into
YONYAKA OMTSHA OTSHAYAYO CHINA!
Ukupheliswa kwengxolo yeJenali yedizili
Ukulawulwa kwengxolo kubaluleke kakhulu kufakelo lweeseti ezininzi zejeneretha. Kukho iindlela ezininzi onokukhetha kuzo ukulawula inqanaba lengxolo. 1. Umsi wokukhupha izinto ezingafunekiyo: Ukutshiza okungafunekiyo kuya kunciphisa izinga lengxolo yenjini yedizili. Amabakala ahlukeneyo esilencers anee-sile ezahlukileyo ...
Iimbalasane ezintathu zokwenza izinto ezintsha zeseti yeCummins
"Ukwaphula okudala kunye nokwenza okutsha, kulula ukuba ufunde kwaye wenze nzima." Emva kwalo lonke utshintsho lwenzululwazi yiminyaka emininzi yokusebenza nzima kunye nokuphola rhoqo. Dongfeng Cummins L9 National VI wenkunkuma akukho ngaphandle! Makhe sihlalutye kunye, ukuqaqambisa into efihliweyo ...
I-STC enye into
Y2 Izigaba eziMithathu zoMbane zoMbane
ngomphathi ku 21-01-31
Inkqubo yokusebenza echanekileyo yomvelisi wedizili
1. Phambi kokuqala i-diesel generator set 1) Vula iingcango kunye neefestile zegumbi elivelisa idizili ukuqinisekisa ukungena komoya. 2) Khupha idipstick kwaye ujonge inqanaba leoyile. Kufanele ukuba iphakathi kwemida ephezulu nephantsi (iintolo ezimbini ezichaseneyo), ayonelanga ukongeza. 3) Jonga ubungakanani bamafutha, yi-ins ...
Umsebenzi kunye nomgaqo we-4-stroke ye-diesel generator
1.Intake iStroke Ukungenisa umoya opholileyo kwisilinda yejenereyitha yedizili ebekelwe ukubonelela umoya ofunwa ngumvelisi wedizili. 2.Ukucinezelwa kwesibetho Ukubethelwa kunye nokukhutshwa kwezivalo zeseti yedizili ivaliwe, ipiston inyuka inyuka, irhasi kwisilinda icinezelwe ngokukhawuleza, umoya ...
Izikhuselo ngokubanzi kwigumbi leenjini yedizili
● Ungaze uvumele abantwana basondele kwiseti yomvelisi. ● Sukusebenzisa ulwelo lokuqala olunokuguquguquka ukunqanda uqhushumbo. ● Sukunyathela iseti yejeneretha xa ungena okanye uphuma kwijenethi esetiweyo, ngapha koko, izinto ezisetiweyo zinokugoba okanye ukuqhekeka kwaye zibangele isekethe emfutshane okanye ...
Iimpazamo ezine zenziwe ngokulula ngexesha lokusetyenziswa komvelisi wedizili
Umsebenzi wephutha lokuqala: Xa injini yedizili isebenza xa ioyile ingonelanga, ukungabikho kweoyile okungonelanga kuya kubangela ukungoneli kweoyile kumphezulu wesibini sokungqubana, kukhokelela kunxibo okanye ukutsha okungaqhelekanga. Ngesi sizathu, ngaphambi kokuqala umvelisi wedizili nangelixa le-opera ...
Ukucaciswa kokulungiswa kweJenereta yedizili
Ukugunyaziswa kweseti yejenreyitha kuqhutywa ngokwamanqanaba amathathu: Uvavanyo kunye nokucoca; B.Akukho Mthwalo kuMsebenzi; C.Ukusebenza noMthwalo. Ukuhlolwa nokuCocwa kwe-2.Ukucoca kunye nokucoca iseti yomvelisi kunye neprojekthi yenguqu yokuhanjiswa kwamandla, kwaye uhlangabeze iimeko ze-putt ...
LANDTOP Idizili Generator
Eminye imibuzo malunga noMvelisi wedizili
1.Yintoni into enegunya kumvelisi wenqanaba lesithathu? Ngaba amandla ombane angongezwa ukuphucula amandla ombane? Impendulo: Amandla ombane yi-0.8. Hayi, kuba ukutshajiswa kunye nokukhutshwa kwesigcini-capacitor kuya kubangela ukuhla kwamandla ombane amancinci kunye ne-Genset oscillates. 2.Kutheni usenza ...
Ifowuni: + 86-18059007868